Xarumaha shidaalka dalka Sacuudi Carabiya oo lala beegsaday duqeyn culus | Xaysimo
Home War Xarumaha shidaalka dalka Sacuudi Carabiya oo lala beegsaday duqeyn culus
Xarumaha shidaalka dalka Sacuudi Carabiya oo lala beegsaday duqeyn culus
Warbaahinta Sucuudiga ayaa ku warantay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones-ka la yiraa ay weerareen oo dab qabad siiyey laba wershadood oo kuwa shidaalka ah oo ay leedahay shirkadda dawladda ee Aramco.
Weerar labaad oo ay qaaday diyaarad aan duuliye lahayn ayaa isna lagu ekeeyey warshadda shidaalka ee Khurays ee dhanka galbeed ee Sucuudiga. Dabkii ka kacay labada wershadood ba haatan waa xakameeyey ayey ku waramaysaa warbaahinta dawladdu.
“Abaarihii 4.00am ee waqtiga Sacuudiga kooxaha nabadgelyada ee warshadaha ee Aramco waxay bilaabeen inay wax ka qabtaan dab ka kacay laba xarumood oo ku yaala Abqaiq iyo Khurais taas oo ka dhalatay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn,” sidaa waxaa yiri Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Sacuudiga.
Sacuudi Carabiya ayaa muddooyinkii u dambeeyay la kulmayay weeraro kaga imaanayay Jabhadda Xuutiyiinta Yemen, iyagoo si gaar ah u beegsanayay xarumaha shidaalka laga soo saaro ee Sacuudiga leeyahay.